आगामी बजेटलाई तीन खर्ब अपुग | NiD - News
जनार्दन बराल, नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २६ माघ
प्रारम्भिक अनुमान : आगामी वर्षको खर्च र आम्दानी
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई करिब ३ खर्ब स्रोत कमी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । तर, हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले सवा १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै स्रोत संकलन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई ६ खर्ब ७० अर्ब बजेट
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ६ खर्ब ७० अर्ब बजेट जाने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ खर्बको बजेट निर्माण हुने र त्यसको कम्तीमा करिब ४५ प्रतिशत तल्लो तहमा जाने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको थियो । यो कुल बजेटको १८ प्रतिशत हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तहलाई ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा प्रदेश तहका लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश तहमा काम गर्ने कुनै पनि संरचना नभएको सन्दर्भमा प्रारम्भिक कामका लागि मात्रै सो बजेट विनियोजन भएको हो । तर, प्रदेश सरकार गठन नै नभएको र त्यहाँबाट मागसमेत नआएको सन्दर्भमा मोटामोटी मात्रै यो बजेट अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । ‘प्रदेश तहबाट आउने मागका आधारमा यो बजेट अनुमान तलमाथि हुनसक्छ,’ स्रोतको भनाइ छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट जाने अनुमान सरकारले गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ गएको थियो । अहिले गएको बजेट तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रारम्भिक मागका आधारमा यो अनुमान गरिएको हो ।
सरकारले तल्ला तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट विशेष र समपूरक अनुदान पनि दिनेछ । यो वर्ष तल्लातहबाट माग नआएको र अनुदान वितरणको सूत्रसमेत नबनेको भन्दै ससर्त र समानीकरण अनुदान मात्रै दिइएको थियो ।
तर, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसमेत भइसक्ने र तल्लातहबाट मागसमेत आउने हुँदा यी दुई अनुदानसमेत थपेर बजेट बन्नेछ ।
कुन कस्ता अनुदान ?
वित्तीय समानीकरण अनुदान – स्थानीय र प्रदेश तहको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र स्थानीय तहको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान । यसको सिफारिस राष्ट्रिय प्राकितिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ ।
ससर्त अनुदान : विगत र वर्तमानमा नेपाल सरकारले गर्दै आएको तर स्थानीय र प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यहरू र नेपालको संविधानको अनसूची ६ र ८ बमोजिमका कार्यहरूका लागि इअर मार्क गरी उपलब्ध गराउने रकम । यसअनुसार कार्यक्रम र रकम दुवै हस्तान्तरण हुने ।
समपूरक अनुदानः स्थानीय र प्रदेश तहले आफूले सञ्चालन गर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि अपुग हुने रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नसक्छ, जुन समपूरक अनुदान हो । तर, यसका लागि बजेटअगावै माग पठाइसक्नुपर्छ ।
विशेष अनुदान : विशिष्टीकृत कार्यका लागि कुनै स्थानीय तह विशेष वा प्रदेश विशेषका लागि छुट्टै उपलब्ध गराउने । कुनै प्रदेश विशेष वा स्थानीय तहविशेष शिक्षामा कमजोर रहेछ भने शिक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
यसपालिको बजेट धान्न १ खर्ब ७३ अर्ब कमी, १ खर्ब ६ अर्बका नयाँ घोषणा
सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउँदा १ खर्ब २ अर्ब अघिल्लो वर्षको बजेटबाट बचत भएर आउने अनुमान गरेको थियो । तर, त्यसो हुनु त कता हो कता गत आर्थिक वर्षका ४८ अर्ब बजेट घाटा भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले दिएको छ ।
‘सरकारको हालसम्मको बजेट घाटा ७१ अर्ब पुगेको छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले बताए । अहिलेसम्मको बजेट घाटालाई समेत पूर्ति गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै १ खर्ब ७३ अर्ब स्रोतको अभाव हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले १ सय ६ अर्बको बजेटबाहिरको दायित्व सिर्जना गरेको छ ।
यसैगरी, सरकारले हालै निर्णय गरेबमोजिम वृद्धभत्ता, भूकम्पपीडित र बाढीपीडितले थप अनुदान पाए भने सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदानमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बजेट पुग्ने भएको छ । यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानबाहेकको रकम हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको रकमसमेत जोड्ने हो भने सवा ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । यो रकम सरकारको यस वर्षको बजेटको करिब ५० प्रतिशत हो ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई नै बजेटको जोहो गर्न नसकिइरहेको अवस्थामा सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई १–१ लाख अनुदान दिने तथा ६५ वर्षमाथिका लागि वृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णयले १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना गर्नेछ ।
तर, यो रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेमा भने सरकारले केही पनि नसोचेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । ‘एकातिर हामी चालू बजेटमै तोकिएका खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ, अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्ले थप १ खर्बभन्दा बढी दायित्व थप्ने निर्णय गरेको छ,’ अर्थका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘यस किसिमको आर्थिक अराजकता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।’
अहिले कति दायित्व ? कति थपिन्छ ?
सरकारको नयाँ निर्णयले यो आर्थिक वर्ष थप १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिनेछ । त्यस्तै, वार्षिक रूपमा करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भारसमेत थपिनेछ ।
यसअघि ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । ती वृद्धवृद्धा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले ३६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष ल्याउँदा ६५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख ४५ हजार ७ सय ३८ छ । उनीहरूका लागि सरकारले वर्षमा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ५५ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यस्तै केही रोगको उपचारमा समेत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यी सबैका लागि सरकारले थप वार्षिक १० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनुमान गरे ।
सरकारले वृद्धभत्ताबापत १ हजार र उपचार खर्चबापत १ हजार गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दैै आएको छ । भूकम्प प्रभावित ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ जनालाई १ लाखका दरले थप अनुदान दिँदा ७६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस्तै, यसअघि नै सरकारले भूकम्पपीडितलाई ३ लाखका दरले अनुदान वितरण गरिरहेको छ ।
त्यसका लागि सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । सरकारले यस वर्षको बाढीबाट घरबार गुमाएका ४१ हजार ६ सय २६ परिवारलाई १ लाखका दरले पुनर्निर्माण अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसले सरकारलाई ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना गर्नेछ ।
यसअघि १० हजार रुपैयाँ राहत र १५ हजार रुपैयाँ आवास पुनर्निर्माण अनुदानबाट कट्टा हुने गरी दिइएको छ । त्यस्तै, बिउबिजनका लागि भनेर २ हजार रुपैयाँ दिइएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माण मूल्यांकन प्रतिवेदन (पिएफआरएनए)ले बाढीको पुनर्निर्माणका लागि ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई आफ्नै स्रोतबाट रकम दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । ‘पहिल्यै निर्णय भइसकेको र बजेटमा समेत परेको ३ लाख नै पनि दिन अप्ठ्यारो छ, स्रोतको समस्या छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा थप अनुदान दिने सम्भावना कम छ ।’
निर्णय यही वर्षदेखि कार्यान्वयन
शंकरप्रसाद अधिकारी, सचिव, अर्थ मन्त्रालय
सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट सरकारलाई थप १ खर्बको दायित्व थपिने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले निर्णय गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता, भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई अनुदान दिने भनेपछि त्यो दायित्व अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्छ । यो विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, निर्णय भइसकेको हुनाले यही वर्षदेखि वितरण सुरु गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले विभिन्न स्रोतबाट रकम त जुटाइरहेको छ । सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको रकम कति खर्च हुन्छ, त्यसका आधारमा थप स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भर पर्छ । बजेटको कार्यक्रममा भएका परियोजनामा त खर्च गर्नु नै पर्‍यो । तर, खर्च नभएर केही रकम बचत हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ । त्यसपछि अन्तिमका गएर कति रकम जुटाउनुपर्ने हो, त्यो हिसाब निस्केला । आन्तरिक ऋण सबै उठाउनुपर्ला । अप्ठ्यारै परेको अवस्थामा राष्ट्रबैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिने विकल्प पनि छ । हामीले लामै समयदेखि ओभरड्राफ्ट लिएका छैनौँ । अप्ठ्यारै पर्ने स्थिति आयो भने यो वर्ष त्यो प्रयोग गर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।
भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप दिने विषयमा अनौपचारिक रूपमा दाताहरूसँग पनि कुरा त भई नै रहेको छ । अब औपचारिक बार्ताहरू पनि गर्ने सोचमा छौैँ ।